Design - Shenzhen King Fu Color Daabacaadda Co., Ltd
Markaad dejinayso aad file waxaa jira saddex arrimood oo muhiim ah in maskaxda lagu hayo:
Aagga goo: Tani waa size ee bogga goo size. Waa size in buug aad ku dhameysatay kaalinta waxaa la gaadhsiin doonaa, height iyo dhererka ee bogga.
Dhiigaan: Tani waa meesha in u waasiciyo DHAAFSAN line goo ah. Haddii aad leedahay a soo jeeda, image ama element kasta design in aad rabto in aad dhiig iska bogga, waa in aad this kordhiyo by 1/8 "(3 mm) ka baxsan marks goo.
Aagga Safe: Hayso sanduuqyada qoraal iyo cinwaanka ku jira aagga amaan, taas oo ah at the 1/8 ugu yar "(3 mm) oo ka aagga goo.
printer oo dhigaya ilaa bogagga soo rogay on xaashida, sidaas darteed waxaa muhiim ah in la dhiso xaydka oo dhan 4 dhinac ee bogga.
Si aad natiijo wanaagsan profiles u baahan in lagu dabaqo images ee Photoshop, ma in InDesign:
Marka diyaarinaya files image aad ee Photoshop, dooro ka Edit ah / Beddelaan in profile iyo doorato mid ka mid ah kuwan soo socda dhibic ka hoos menu:
• Wixii GRACoL , Adobe profile: dahaarka GRACoL 2006 (ISO 12647-2: 2004)
• Wixii FOGRA dahaarka leh, Adobe profile: dahaarka FOGRA39 (ISO 12647-2: 2004)
• Wixii FOGRA Qaxwo, profile Adobe: Qaxwo FOGRA47 (ISO 12647-2: 2004 )
Dib u eeg tilmaamaha qaybtan si ay uga caawiyaan diyaariyo faylasha aad sida ugu saxsan ee suurtogalka ah. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad ka fogaato qaladaad inta lagu guda jiro preflight. Haddii aadan hubin in files aad loo diyaariyay si sax ah fadlan la xiriir fulinta iibka wixii talo ah.
aqbali karo Files
Codsiga Files ajiibay:
• Adobe muujiye (. Aan ku haboon khariidad gudaha Fadlan xaddido in ay saf waraaqaha farshaxanka iyo bogga kaliya, sida logos, jaakado, iwm)
• Print PDFs diyaar u abuuray files codsiga kor ku qoran ee
Waxaan ku talinaynaa in aad isticmaasho PostScript, OpenType ama noocyada TrueType. Qaar ka mid ah noocyada la isu kharribeen inta lagu guda jiro gudbinta, sida on DVD gubasho ama uploading via FTP. Waxaan ku talineynaa compressing noocyada hor u gudbintooda.
Ha abuuro noocyada in aadan haysan dhiganta font printer ah. Tusaale ahaan, in barnaamijka khariidad aad waxaad dooran kartaa "Helvetica" ka dibna riix a style "Geesi" sababtoo ah waxaa jira baahisey "Helvetica Geesi" font printer ah. Laakiin haddii aad dooro "Futura culus" ka dibna codsan a style "Geesi" waxaa si aad ma ka heli doonaa version dhiirani ah font in yeelay, ma jiro font printer baahisey.
Waxaan ku talinaynaa in aad xulan font aad rabto in aad si toos ah in menu font halkii xulashada font salka iyo codsanaya style a. Iyada oo noocyada waaweyn ay ku jiraan miisaanka badan farsamo dambe ka dhigi kara natiijada la saadaalin karin.
Markaad dejinayso oo aad midabka font, fadlan sii tilmaamahan maskaxda ku:
8 PT. 100% ka mid ah midabka adag.
12 PT. at 60% ilaa 80% ka mid ah midabka
16 PT. at midabka CMYK. Font CMYK yar daabacan doonaa qar iyo muuqan (diiwaanka ama off) haydh maxaa yeelay dhibcaha lagu daabacay sida screen.
Dabida waa kordhin graphic ama image by 0.25pt in ay ka fogaadaan wax kasta oo HALO caddaan ama farqiga agagaarka image ama graphic. Guud ahaan midabada habka aan u baahnayn in la xayiran, in kastoo ay jiraan qaar ka reebban. InDesign ayaa horena goobaha dabin, guud ahaan aad uma baahna in ay ka welwelaan ku saabsan ku xannibay.
Waa in aad ogaataa ee ku xannibay marka aad reebtay image ama design element ka soo jeeda adag. Waxaa jira labo siyaabood si looga fogaado HALO cad, ama waxa u muuqda in misregistration, by codsanaya qoynin oo sax ah ama by overprinting. Overprinting waxaa lagu talinayaa in qoraalka ama khafiif naqshadeynta ama laymanka, laakiin xusuusnow overprinting in dari doonaa midabka loo xilsaaray ee shayga si midabka dahsoon oo saamayn ku yeelan kara midabka shayga.
Haddii aad leedahay text cagaaran (c: 95, m: 0, y: 80, k: 0) on buluug ah ku fadhiya (c: 95, m, 20, y: 10, k: 0) jeeda, aadan sameyn u baahan tahay inaad dabin sababta oo ah asalka cyan adag IYO haddii qoraalka waa 16 PT. ama ka yar waa in aad la dhigay qoraalka si ay u OVERPRINT.
Image Samee Up
Hi ares files image waa in had iyo jeer la soo gudbiyaa sida TIFF, PSD, AI ama EPS files. Qodobka ugu muhiimsan ee dhalmo tayo leh waa size finalka file. All files image waa in ay ahaataa 300 DPI (dhibco per inch) iyo farshaxanka line waa in ay 1200 DPI at size final.
Image badan iskaan at 150 DPI qoral u dhiganta image ah size badhkiisa, waa in la marsiiyey at 300 DPI. Labada keeni doontaa in file ah in qiyaas ahaan waa inay isku qiyaas.
Marka loo diyaarinayo files image aad aad u baahan tahay in ay qabsadaan xaddiga saxda ah ee macluumaadka. Haddii files waa mid aad u yar yar waxay u muuqataa kharibi ama pixelated. Haddii ay aad u weyn yihiin inay sameeyaan shaqo imagesetter ah mid aad u adag ama soo saari karaan baadi Postscript ah.
Images ka yar 300 DPI (ama 1200 DPI fanka line) ka dhigi doonaa in qalad lagu guda jiro geeddi-socodka preflight. All images hi-ares baahan yihiin in la qotomiyey sidii CMYK, iyo in aan ka badnayn + 15% ama -15% of size dhalmo ah. Farshaxanka ka web site a soo bixi sida caadiga ah waa mid aad u yar yahay xalinta for dhalmo print. Iska ilaali inaad isticmaashid khadadka gudahood farshaxanka in ay yihiin khafiif badan .5 dhibcood.
All images waa in la soo gudbiyaa sida CMYK, ma RGB format. midabka oo dhan waa in la retouched iyo midabka saxo ee Photoshop ka hor images la keeno galay InDesign.
Raster ama bitmap images ku jira foomka of god yar oo Roobka sida hannaankii loo yaqaan pixels, si ay u matalaan muuqaallo kale. pixel kasta ee image bitmap ah ayaa goobta iyo midabka qiimo gaar ah loo xilsaaray in ay. Nooca faylka ugu caansan waa TIFF, EPS ama files Photoshop PSD.
Marka loo diyaarinayo files sawir for dhalmo print waa in aad had iyo jeer soo saaraan images TIFF ama files PSD. files TIFF ku badan yihiin, oo waa format furan, taas oo macnaheedu yahay in ay la isticmaali karaa InDesign ama Quark. files PSD waxaa loo isticmaali karaa oo keliya barnaamijka Adobe Photoshop.
file kale image caadiga ah waa jpeg ah. Ugu horayn loo isticmaalaa sawiro, jpeg waa mid ka mid ah laba qaabab file caadiga ah loo isticmaalo internetka. Waa qaab Tifaftirayaasha sidaas macluumaadka la waayay riixo. Haddii aad qabto file jpeg aad rabto in aad isticmaasho far a, u furan Photoshop dooro: Image-> Mode-> CMYK Color (ama cabbircawl).
Waa hagaag in resample ka image weyn in ka yar hal. Photoshop fudud oo dalkeeda ka soo pixels dheeraad ah iyo sanam muuqan doonaan kuwo yar iyo qayb kasta oo sida af badan yahay sida ay hore u ahayd.
Waxaa MARNA waa fikrad wanaagsan inaad upsample ka image yar oo si weyn mid ka mid ah. Xaaladdan oo kale, Photoshop darayaa pixels suuradda. Barnaamijku wuxuu ku meelaynayaa midabka kuwaas pixels cusub oo ku salaysan midabka ah ee pixels dariska ah. Tani waxay keeni kartaa in sanam xardhan oo aan blurrier ka badan asalka ah, sida lagu muujiyay midigta.
Marna ha soo gudbiyaan files image GIF wax soo saarka print.
Waxay ku xiran tahay mashruuca, waxaad samayn kartaa images sida 1 midabka madow iyo caddaan, duotones, ama 4 images CMYK midabka.
1 midabka image madow iyo caddaan waa la dhigay guud ahaan iyadoo la isticmaalayo habka madow. Tilmaamaha iyo Hooskooda loo diyaariyay in cabbircawl.
2 midabka image madow iyo caddaan waxaa loo sameeyey iyadoo la isticmaalayo habka madow iyo midabka ah PMS. midabka PMS waxaa loo isticmaali karaa si aad u dalbato midabka sepia ama cawl PMS si ay u abuuraan faahfaahin dheeraad ah ee kooban ee grayscalefrom in hoosku.
4 midab madow iyo caddaan waxaa la abuuray isticmaalaya CMYK iyo in la siiyo si faahfaahsan ugu xooga ka in hoosku. 4 images midabka madow iyo caddaan u baahan tahay isku dheelitirnaan aad u jilicsan. Markaad dejinayso faylasha aad, aad leedahay si aad u hubiso in aysan jirin midab in images xoori doonaa. Waa in aad la baabi'iyo kabka ee Photoshop hor image la keeno galay InDesign.
Output oo dhan files sawir dulinka sida EPS ama AI (muujiye). U hubso in aad u dhigma magacyada midab in files kuwaas oo ah in magacyada midabada mid ah software khariidad.
versions qaar ka mid ah Adobe muujiye ogolaado in aad kor ama hoos u qaraar saarka default Adobe muujiye ee. Ha dheelli goob this. Qaadista xalka keeni doonaa dhabbayaal liidata sameeyay. waxaa kor u siiso khaladaadka aan loo baahnayn lagu jiro preflight.
Save files tahay line sida images bitmapped. Haddii aad badbaadiyo, cabbircawl, geesaha laga yaabaa in wax soo saarka la screen halftone ah iyaga muuqan kharibi ama qar.
Isticmaalka adkaha Black khad
Haddii aag aad u ballaaran of madow adag gudbi doonaa tints kale ee la dhisay, waxaa jiri doona farqi u dhexeeya cufnaanta meelaha ay ka gaareen midabka iyo kuwa aan ka weyn tahay midabka. Xalku waa in la dhiso a "madow hodan" darka towns sida soo socota:
Isticmaalka this madow hodan fogaado doonaa wixii kala duwanaansho cufnaanta cad ee adkaha madow. Sidoo kale waa formula fiican soo saara cufan, madow direyska adag, xitaa marka aan la gudbaya midabyo kale.
xubno kale oo madow ah sida xeerarka, nooca, iyo xubno sawir khafiif ah waa in la wuxuu ka kooban yahay 100% madow iyo qarka u saaran inuu overprint.
Tixgeli ku daray varnish on pages in ay yihiin midabka madow adag jeeda page cad si looga hortago dhigay off.
Sii daynta Your Project
Ka hor inta soo gudbinaya faylasha aad, fadlan isticmaal amarka Preflight in InDesign si loo hubiyo faylasha aad.
Fadlan ka mid ah:
• images oo keliya in loo isticmaalo khariidad. Hubi in magacyada iyo goobaha files lala ma bedelo ka dib markii aad faylasha aad.
• Dhammaan tirada image bitmapped waa inuu ugu yaraan 300 DPI, iyo dhammaan faylasha tahay line dulinka waa inuu ugu yaraan 1200 DPI
• TIFF iyo EPS files waa in ay ahaataa CMYK, ma RGB. All images sida TIFF, iyo dhammaan line dulinka tahay sida EPS.
• Ku dar dhamaan noocyada loo isticmaalo, oo ay la socdaan noocyada ay printer baahisey, xataa haddii font waxaa caadi ahaan loo isticmaalo.
• Tuur oo dhan midabada aan la isticmaalin. Palette midabka InDesign ayaa ah "Dooro All aan la adeegsan" option kaa caawin doona inaad si ay u helaan oo u tirtirto swatches kuwan.
• Hubi in midab kasta uu leeyahay magac oo keliya hal.
• Fududee muuqaallo kale ay u isticmaalaan tirada ugu yar tallaabooyinka in boorish ah ama tirada yar ee dhibcood ku waddo.
• Hubi in dokumentiyada Photoshop ha ku darin layers aan la isticmaalin ama ku qarsoon. Haddii kale, qaladaad dooxeen laga yaabaa inuu dhaco iyo layers qarsoon waxaa laga yaabaa in wax soo saarka iyo in la abuuro natiijo aan la filayn.
• Tuur xubno aan la isticmaalin on pasteboard ama xubno ka yihiin in si buuxda qarsoon by shey kale.
• bogagga idil waa inay lahaadaan trims iyo xaydka (xaydka waa in la kordhiyo 3mm ama 1/4 "ka baxsan goo ku saabsan oo dhan 4 kooxood).
• Ku dar PDFs ares hooseeyo meelaynta iyo / ama daabacaadda laser. Ku qor bogga tiro on laser haddii buugag ku aadan daabacan ama PDFs ares hooseeyo meelaynta.
• Ku dar codsigaaga ama PDF files gaar ah qoraalka iyo cover, kiis kasta qaybaha kale (endpapers, ku qabanaya, iwm)
• hanuun Color, haddii aad qeybinayay.
Waxaad gudbin kartaa faylasha aad via wetransfer, Hightail ama barnaamij kale file sharing online, ama drive la qaadi karo (hubi in aad ka mid ah cable ka in ay ku xidhmaan computer). Gudbi InDesing ama hi-ares daabacan PDFs diyaar la marks goo oo goror ka mid ahaa.
Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo qotomiyey PDFs, fadlan booqo goobta Adobe caawimo: https://helpx.adobe.com/indesign/how-to/indesign-create-pdf-for-print.html?set=indesign-get -started-daruuriga ah-bilowga ah